အဆိုပါ Big လူငယ်များသို့ကနေထိပ်တန်း6ဂေါက်သီး
အကောင်းဆုံးနဲ့ Big လူငယ်များသို့ဂေါက်သီး: ထိပ်တန်း6Big လူငယ်များသို့ alum
အဆိုပါဂေါက်ကွင်း Channel ကိုစီးရီးထဲကလာဖို့အကောင်းဆုံးဂေါက်သီးကိုအဘယ်သူဖြစ်ကြ အဆိုပါ Big လူငယ်များသို့ ? အောက်တွင်ကျနော်တို့ထိပ်တန်း6Big လူငယ်များသို့ alum အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာတှငျကြှနျုပျတို့ Big လူငယ်များသို့ပြိုင်ပွဲဝင်ပြပွဲအပေါ်ဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်ပြည့်စုံမှသာအဘယ်အရာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား။
Big လူငယ်များသို့သမိုင်း: Cast နှင့် Winners
ဘယ်လိုကြီးလူငယ်များသို့ Champs သူတို့ရဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်အတူအခြေအနေကောပါပြီ
2014 အာနိုး Palmer ကဖိတ်ကြားချက်ကိုအနိုင်ရပြီးနောက်ဖလားနှင့်အတူ, Matt တိုင်း။ ဆမ် Greenwood / Getty Images
တိုင်း, Big လူငယ်များသို့ Mesquite မှစ. , 2014 အာနိုး Palmer ကဖိတ်ခေါ်ချက်မှာသူ၏ပထမဦးဆုံး PGA Tour အောင်ပွဲရရှိခဲ့သည်။ ဒါကသူ့ကိုအပေါ်အနိုင်ရမှဒုတိယဟောင်းတဦးနဲ့ Big တနေ့လုပ် PGA Tour (Tommy Gainey ပြီးနောက်) ။
ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို alum တို့တွင်ပထမဦးဆုံးနှစ်အချိန် PGA Tour ဆုရှင်အောင်, 2015 ခုနှစ်တွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဟေးလ်မှာ Palmer က Champ အဖြစ်ထပ်ခါတလဲလဲ အဆိုပါ Big လူငယ်များသို့ ။ သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်နံပါတ် 1 အောင်။
သူ၏ပထမဦးဆုံး Palmer ကအနိုင်ရရှိ၏ထိုအချိန်ကက PGA Tour အပေါ်တိုင်းရဲ့တတိယအပြည့်အဝရာသီဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်ယခင်ကနှစ်ခုဒုတိယအရပ်ကိုချောနှင့်သုံးပုံတစ်ပုံအရပ်ကိုခဲ့လျက်, အပေါ် 53 သကဲ့သို့မြင့်မားသောကိုလက်စသတ်ခဲ့ FedEx အချက်များ စာရင်း။
သို့သော် 2014 ခုနှစ်ကြောင်းအချက်အားမိမိကအကောင်းဆုံးတစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည် - သို့မဟုတ်ကတည်းက။ တိုင်းဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထွဖလားစာရင်းတွင်ငွေကိုစာရင်းနှင့် 45 ရက်တွင်ခြောက်ဦးထိပ်တန်း 10s နှစ်တွင်, ချော 33 ရှိခဲ့ပါတယ်။ 2015 ခုနှစ်တွင် API ကို Champ အဖြစ်ထပ်ရှိနေသော်လည်းတိုင်းပိုက်ဆံပေါ်အသီးသီး 68 နှင့် 89th ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်စာရင်းများထောက်ပြသည်။
Big လူငယ်များသို့ Mesquite အပေါ်သူ၏အချိန်ကိုချက်ချင်းအပြီးတွင်ခုနှစ်တွင်တိုင်း 2008 ခုနှစ်ကတစ်နိုင်ငံလုံးလှည့်လည်ပိုက်ဆံစာရင်းတွင် 34 ခဲ့တယ်, ထို့နောက် 2009 ခုနှစ်တွင်တစ်နိုင်ငံလုံးလှည့်လည်ချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Tommy '' နှစ်ဦးကလက်အိတ် '' Gainey
သူတို့ (Tommy Gainey ရဲ့လက်ပေါ်မှာနှစ်ခုဂေါက်သီးလက်အိတ်ကိုတွေ့မြင်?) Tommy နှစ်ဦးလက်အိတ်သူ့ကိုမခေါ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ Todd Warshaw / Getty Images)
ရီရူနီယန်: ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးရာသီ4မှာ, ပြီးတော့ Big လူငယ်များသို့ VII မှာပေါ်ဆုရှင်အဖြစ်, အဆိုပါ Big လူငယ်များသို့အပေါ်နှစ်ကြိမ် Tommy Gainey ကိုမြင်တော်မူ၏။ ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းပြီးနောက်, တဖန်ဒုတိယပြီးနောက်, Gainey အောက်ပိုင်း-Level ဆားကစ်များနှင့်အပေါ်ကိုအနိုင်ပေးနှင့်အတူတောက်ပြသ တနင်္လာနေ့ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်မှုတွေ။ သို့သော် 2008 ခုနှစ်ကတည်းကသူသည်ဖြစ်စေ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ရဲ့ PGA Tour သို့မဟုတ်တစ်နိုင်ငံလုံးလှည့်လည်။
Gainey 2008 ခုနှစ်ဒစ္စနေးမှာပြေးသမား-Up ခဲ့, သူသည်သုံး Third-ရာအရပျ PGA Tour 2011 ခုနှစ်ပြီးသွားသူ၏ပထမဦးဆုံး PGA Tour အောင်ပွဲသူအနိုင်ရမှနောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ 60 သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ရာအရပ်, 2012 McGladrey ဂန္ထဝင်မှာဖြစ်ပျက်ကဆက်ပြောသည်။
Gainey ရဲ့ PGA Tour စွမ်းဆောင်ရည် 2013 ခုနှစ်မှာချော်နှင့်သူသည်ပိုက်ဆံစာရင်းတွင်ထိပ်တန်း 125 အပြင်ဘက်ကျဆင်းကား, မိမိအတိတ်ချန်ပီယံအနေအထားကိုသူ့ကိုခရီးစဉ်ကိုချွတ်ကျသွားအပေါ်တစ်ဦး reprieve အပ်ပေးတော်မူ၏။ ဒါပေမယ့်သူက 2014 ခုနှစ်ကြီးတွေခရီးစဉ်ထဲကလဲကျခဲ့ဘူးနှင့်ကစားထားပြီး Web.com ခရီးစဉ် ကတည်းက။
ဟောင်းများ '' Big လူငယ်များသို့ '' ဂေါက်သီးတိုနီ Finau ။ ယာရက် C. Tilton / Getty Images
သူကအသက် 19 နှစ်အရွယ်မှာ (သူ၏အစ်ကို Gipper Finau နှင့်အတူ) တိုနီ Finau Big လူငယ်များသို့ဒစ္စနေးဂေါက်သီးရိုက်ခဲ့သည်။
သူကအနိုင်ရနေဖြင့် Big လူငယ်များသို့ alum ကြားတွင်ကြီးမားသော-ခရီးစဉ်ဆုရရှိသူ၏ရာထူးပူးပေါင်း Puerto Rico ပွင့်လင်း 2016 အတွက် PGA Tour ပေါ်မှာ။
Finau တစ်ချိန်ကအနိုင်ရနှင့် PGA Tour မှမြှင့်တင်ရေးဝင်ငွေ, 2014 ခုနှစ် Web.com ခရီးစဉ်ကစားခဲ့ပါတယ်။ 2015 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦး PGA Tour လူသစ်အဖြစ်ကိုသူ FedEx Cup ပြိုင်ပွဲရမှတ်အတွက်ငွေကြေးနှင့် 43 အတွက် 40 ပြီးဆုံး။
Gerina Piller 2015 Solheim ဖလားစဉ်အတွင်းပုံ။ သောမတ်စ် Niedermueller / Getty Images
သူမအပေါ်အားထငျရှားသညျ့အခါသူမသည်သူမ၏သမီးကညာကိုအမည်, Gerina Mendoza အားဖြင့်လူသိများခဲ့သည် Big လူငယ်များသို့ Prince Edward Island တွင် ဒုတိယနေရာတစ်အကောင်းဆုံးပြအတူမျိုးစုံထိပ်တန်း 10 ဦးချောပို့စ်တင်, 2008 ကနေ 2010 ကနေတဆင့် Futures ခရီးစဉ်အပေါ်ကစား 2009 ခုနှစ် Piller အတွက်ထုတ်လွှင့်သော။
သူမသည် 2010 Futures ခရီးစဉ်ပိုက်ဆံစာရင်းတွင်သူမ၏ 5th-ရာအရပျ finish ကို၏ခွန်အားအပေါ် 2011 ခုနှစ် LPGA Tour မှဘွဲ့ရခဲ့သည်။ Piller အဆိုပါ LPGA အပေါ်အနိုင်ရမှမရှိသေးပါစဉ်နှင့်အညီ, သူမအများကြီးထိပ်တန်း 10s နှင့်မျိုးစုံပြေးသမား-up, ချောနှင့်အတူတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။
သူမသည် LPGA ပိုက်ဆံစာရင်းနှင့်ကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်ထိပ်တန်း 25 ရက်တွင်ထိပ်တန်း 20 အက်ပါတယ်။ နှင့် 2015 ခုနှစ်, Piller မှာအဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက် 3-0-1 သွားလေ၏ Solheim ဖလား အနိုင်ရကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်ဖြစ်ထွက်လှည့်အဘယ်အရာကိုနစ်မြုပ်အပါအဝင်။ Piller ပထမဦးဆုံး 2013 ခုနှစ် Solheim ဖလားအတွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။
Trump အမျိုးသား: Kristy McPherson Big လူငယ်များသို့ VI ကိုပေါ်ရာသီ၏တတိယဖျက်သိမ်းရေးအတွက်ဖြုတ်ချခဲ့သည်။ သို့သော်သူမဖြစ်ကောင်းလည်းထွက် bummed မခံခဲ့ရပါဘူး။ ပြပွဲထုတ်လွှင့်သည့်အချိန်အားဖြင့်, McPherson ပြီးသား 2007 သူမ၏ LPGA Tour အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ငွေ, 2006 Futures ခရီးစဉ်ပိုက်ဆံစာရင်းတွင်စတုတ္ထပြီးဆုံးခဲ့သည်။
ထိုအ McPherson ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းတစ်တည်ငြိမ် LPGA ကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ 2007 ခုနှစ်ကတည်းကသူမသုံးပြေးသမား-up, ချော posted နီးပါး 20 ထိပ်တန်း 10s ။ သူမ၏ပိုက်ဆံစာရင်း, 2007 နှင့်အတူစတင် 97th ခဲ့ကြသည်, 47, 16 နှင့် 27 ပြီးသွား။ သူမသည် 2009 ခုနှစ်ကအမေရိကန် Solheim ဖလားအဖွဲ့သည်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သို့သော်သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသောနောက်နှေးကွေး။ သူမ၏ပိုက်ဆံစာရင်းထိပ်ဆုံး 50 ပြင်ပမှာကျဆင်းသွားခြင်း, တစ်ဦးချင်းစီရာသီကိုလျှော့ချ 2011 နှင့် 2012 ခုနှစ်တွင်ပြီးဆုံး။ 2016 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ခရီးစဉ်ကဒ်ပျောက်ဆုံးသွားချင်ပါတယ်။
Nitties ရာသီ 8 မှာတစ်သွန်းအဖွဲ့ဝင် Nitties အဆိုပါ Von Nida ခရီးစဉ်သြစတြေးလျရဲ့ဒုတိယအဆင့်ကို circuit ကိုအပေါ်အနိုင်ရထိုနှစ်ထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ Big လူငယ်များသို့ Mesquite အပေါ်တိုင်းတစ် castmate ဖြစ်ခဲ့သည်။
2009 ခုနှစ်တွင် Nitties သည့် PGA Tour ပေါ်သို့သူ၏လမ်းကစားနှစ်ခုထိပ်တန်း 10s အပါအဝင် 27 စတင်, 15 ဖြတ်တောက်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကကိုယ့်အောက်မှာ $ 1 သန်းနှင့်အတူပိုက်ဆံစာရင်းတွင် 88 ပြီးဆုံး။ 2010 ခုနှစ်တွင်သူသည်ထပ် PGA Tour အပေါ် 15 ဖြတ်တောက်မှုကိုဖန်ဆင်းကား, မိမိပိုက်ဆံ-စာရင်း finish ကို 134th မှချော်မိမိကဒ်ပျောက်ဆုံးသွားစေတော်မူ၏။
သို့သော်သူသည်ဗစ်တိုးရီးယား PGA Championship 2010 at အတွက်သြစတြေးလျားခရီးစဉ်အပေါ်အိမ်ပြန်အနိုင်ရခဲ့ပေ။ 2011 ခုနှစ်, Nitties တစ်နိုင်ငံလုံးခရီးစဉ်အပေါ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပေမယ့်ပိုက်ဆံစာရင်းတွင်ကြောင်းချော 26 ရှိနေသော်လည်း - မိမိပြန်လည်လွန်းနိမ့်တစ်နေရာတည်း PGA Tour ကဒ်။ သူကနောက်ပိုင်း Web.com ခရီးစဉ်အပေါ်ကစားရဲ့။
ယောဟနျသ Daly သောက်: ချက်ပြုတ်နည်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်ကော့တေးဟာဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမားများအတွက် Named သည်
က Tiger Woods '' ရွက်လှေ: အအမည်, Size ကိုများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ?
မက်စ် Weber ရဲ့ "သံကေ့" နားလည်ခြင်း
လေးကတ် Poker Play ရန်ကဘယ်လို
'' Jamesy Boy '' အကြောင်း Spencer Lofranco ဆွေးနွေးပွဲ
အဆိုပါကောက် Quotes & ဝေါဟာရအတွက်ကို Catcher
တစ်ဦးထဲလ်ဆိုတာဘာလဲ - ရှေးဟောငျး Mesopotamian မြို့ကြီးများ၌ကျန်ကြွင်းသော
Bard College မှာအဆင့်လက်ခံရေး
အဘယ်ကြောင့်အမေရိကန်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ Enter ခဲ့သလား
အဆိုပါဆီဂေါက်ခုနှစ်တွင် Shot: ဒါဟာဒါဟာစေတယ်အဘယ်သို့ဖြစ်ကဘာလဲ
တစ်ဦး Neti Pot အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
တစ်ဦးဂန္ထဝင် Mustang ရဲ့ VIN ဒေတာများပြားရန်ဒီကုဒ်ကဘယ်လို
မမေ့နိုင်သော Morpheus '' အဆိုပါ Matrix '' ကိုးကား
15 Funny က်ဘ် Express နှင့်သင်သိရန်လိုအပ်အတိုကောက်ဝေါဟာရများ
ဂျိုဒီ Picoult ဖွငျ့အကြှနျုပျညီအစျမရဲ့ဂိုးသမားများအတွက်စာအုပ်ကလပ်ဆွေးနွေးချက်မေးခွန်းများ
အာဖရိကန်အမေရိကန်သုတျတှငျအဘယျ Signifying နည်းလမ်
Lewis - အမည်အဓိပ္ပာယ် & မူလအစ
တစ်ဦး Butterfly ၏အစိတ်အပိုင်းများ